Booqashada Lafta-gareen degmada go’doonsan ee Waajid (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Booqashada Lafta-gareen degmada go’doonsan ee Waajid (SAWIRRO)
Booqashada Lafta-gareen degmada go’doonsan ee Waajid (SAWIRRO)
Madaxweynaha Koonfur Galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray Degmada Waajid ee Gobolka Bakool.
Sideedii bilood ee ugu dambeysay waxay Waajid wajaheysay go’doomin daran oo ay ku hayeen maleeshiyada Al Shabaab, wax ganacsi ahna dhinaca dhulka muddadaasi laguma keenin degmadaasi.
Shabaabka ayaa dhowr jeer wadooyinka soo gala degmadaasi ku gubay gaadiid ganacsi, ka dib markii ganacsato ay isku dayeen in si qarsoodiya ay maciishadda quutul daruuriga ku soo geliyaan degmada.
Booqashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Degmada Waajid ayaa la xiriirta u kuurgelidda xaaladda nolosha, midda amniga ee ka jirta degmadaasi iyo inuu kaga qaybgalo caleemo-saarka Gudoomiyaha Degmada Waajid oo bishii April ay doorteen Golaha Deegaanka ee Degmada Waajid.
Madaxweyne Lafta-gareen oo dadweynaha kula hadlayay Xarunta Hanuuninta ee Waajid ayaa sheegay inay degmada u yimaadeen in ay shacabka kala sheekeystaan xaaladda ay ku nool yihiin iyo ka qaybgalka caleemo-saarka sida uu yiri maamulka ay aad doorateen.
Madaxweynaha ayaa dadka deegaanka ku ammaanay si kastoo ay Shabaabka u go’doomiyeen degmadooda inaanay ka barakicin, isla-markaana ay dhabar adeegeen, oo ay dulqaateen.
Sida uu sheegay Madaxweynuhu waxaa dhawaan la qaadi doonnaa hawlgalo lagu furaayo wadooyinka, isagoo xusay in la arki doono Waajid iyo Baydhabo oo isku furan.
“Sidii safarkii horeba aan aniga ballanqaaday in la arki doono haddii Alle yiraahdo jidadka oo furma, Waajid iyo Baydhabo oo isku furan, Waajid iyo Xudur oo isku furan. Qorshaha ugu horeeyo ee qaban doonana kaasuu noqon doonnaa.” Ayuu yiri Madaxweyne Lafta-gareen.
Muddada labada sano iyo lixda bilood ee xafiiska uu jooggo Madaxweyne Lafta-gareen ayaad mooddaa inay Shabaabku kordhiyeen go’doominta ay ku hayaan deegaanada Koonfur Galbeed, taasoo loo aaneeyo maamulka oo ka gaabiyay hawlgaladii lagula dagaalamayay.
Previous articleCaqabadaha ku gadaaman muddada lagu heshiiyay in doorashada dalka lagu qabto
Next articleRooble oo magacaabay Guddiyada Doorashooyinka & Xalinta Khilaafaadka